I-APK ye-King VM yokukhuphela uKhuphelo we-Android [i-PUBG Virtual]
Ngamana 17, 2021 Ngamana 14, 2021 by Shweta Tripathi
Umhlaba we-Intanethi ugcwele iihacks kumdlalo wePUBG. Kodwa uninzi lwazo zinika ukhetho olulinganiselweyo. I-APK ye-King VM yobuchwephesha yinto eyodwa. Le ye-app ye-ESP eza kuvuthuza ingqondo yakho. Funda inqaku kwaye wazi ngakumbi ngalo.
Sine-craze yokwenza ngcono kwiqonga le-PUBGM. Olu daka sele luchukumisa amanqanaba okufumana iziyobisi ngokugqithileyo. Umdlalo udume kakhulu kwihlabathi liphela, ngoku ligama eliqhelekileyo phakathi kwazo zonke iintlobo zabasebenzisi abahambahambayo.
Ukuba unokufikelela kwi-intanethi kwaye ungumnikazi we-smartphone. Umele ukuba uyivile nayo. Apha siza kukubonelela usetyenziso lweHack onokulusebenzisa nakwizixhobo zeengcambu ngaphandle koloyiko lokuvalwa. Ukuze ube nakho ukufumana ukhetho lokukhuphela kweli phepha kwaye ulifakele simahla kwifowuni yakho yefowuni eyi-Android okanye iThebhulethi.
Yintoni i-King VM APK?
Ngokwenyani esi sisicelo seHack for platform yePUBG. Oku kukopa kwe-ESP yenye yezinto ezimangalisayo onokuze uzifumane kuluhlu lwazo zonke izicelo ezinjalo ezikhoyo kwiqonga le-Intanethi.
Njengoko uyazi ukuba i-PUBGM ngumdlalo wokwenza isenzo osungulwe kwiifowuni eziphathwayo kunye nee-Smartphones kubandakanya isixhobo esisebenzayo se-Android. Le app sithetha ngayo ikuvumela ukuba ufake uluhlu olude lweengcingane kwi-videogame ngaphandle kokufaka umngcipheko ekuzaziseni.
Sonke siyayazi ukuba ukwahlulwa kuleqonga lokudlala akunakwenzeka ngaphandle kokugcina ixesha elininzi kwizakhono zokufunda nokwenza intshukumo yethu ibukhali kwaye ibexekileyo.
Nangona kunjalo, uninzi lwethu alunamonde yokufumana ezi zakhono ngokuthe ngcembe. Asinakho ukufikelela kutyalo mali lwexesha kunye nezixhobo.
Kwabantu abanjalo nakwabo bafuna ukubakholisa abahlobo kunye neentshaba ngokufanayo sineapps ezifana ne-technical King VM APK. Kukho izixhobo ezibizwa ngokuba yiHacking okanye ukukopela isoftware. Ezi zinto zenzelwe ngokukodwa ukunika umsebenzisi ithuba lokusebenzisa izinto ezininzi kumdlalo.
Ezi zinokusetyenziswa ngexesha lomdlalo ukuze ube namandla, ube nezixhobo ezingaqhelekanga, ukwandisa ubomi, i-ammo, okanye nayiphi na enye into emidlalayo umdlalo. Uya kubona ukuthengisa kwi-Intanethi kugcwele izinto ezinjalo kunye nezixhobo.
Ezi zixhobo ezincedisayo nangona kunjalo azizona ezokuziphatha ixesha elininzi. Ngapha koko, ababoneleli bemidlalo yeofisi abayithathi lula kwaye bathathe amanyathelo rhoqo ukuseka indawo yokudlala elungileyo kubo bonke abasebenzisi.
Oku kuthetha ukuba abantu abasebenzisa izixhobo ezinjalo ze-hashi bashenxisiwe kumdlalo okanye iqonga okanye banikwa isilumkiso. Kuxhomekeka kwithamsanqa lomntu obanjiweyo.
Ngaphandle kwale mingcipheko, inani elikhulu le-videogame yabathandi basebenzise izixhobo ezinje kwaye i-King VM APK ye-APK iphambili uluhlu.
igama I-technical VM PUBG
ubungakanani 6.89 MB
umbhekisi Yezobugcisa King
Igama lepakheji com.tencent.ig.com.pubg.krmobile.com.vng.pubgmobile.com.rekoo.pubgmobile.tkvm.tk22
Iyafuneka i-Android 4.1 nangaphezulu
Iimpawu ze-APK yeKing VM ye-APK
Le khithi yesixhobo esimangalisayo inezinto ezininzi ezimangalisayo. Uya kuyifumana iluncedo kakhulu, inobuhlobo, kwaye iguquguqukayo ngamava abushelelezi omsebenzisi. Nazi ezinye zeempawu.
Ayisebenzi imo yeengcambu. Ke akukho sidingo sokuhamba kwinkqubo ende kwaye edinayo yokucutha ifowuni. Izibhamu ezininzi ezifana neMK, A4, kunye nezinye ezininzi ziya kufumaneka ngaphandle kwakho ngaphandle kokuba wenze naziphi na iinzame. I-ESP yokuchonga indawo yezithuthi ezinjengeemoto, iilori.
Ezinye ii-hacks zidweliswe apha ngezantsi.
Uyenza njani i-King VM APK yokukhuphela?
Dlulela kula manyathelo. Oku kuya kukuxelela indlela yokukhuphela usetyenziso, ukuyifaka, kunye nokuyisebenzisa.
Kuqala, khangela iqhosha lokukhuphela u-APK kwikhonkco elingezantsi
Thepha kuyo ukuqala ukhuphelo
Fumana ifayile kwifowuni yakho kwaye ucofe kuyo ukufaka
Vumela imithombo engaziwayo kwiiSetingi zoKhuseleko
Ngoku cofa amaxesha ambalwa ngakumbi kwaye ugqibile.
Oku kuyakukufakela isixhobo sokukhangela izixhobo ze-APK ye-King VM yakho. Ke yivule kwimvelaphi yomdlalo. Khetha kwiseti yokufuna ofuna ukuyisebenzisa kwaye uyenze ukuba isebenze. Ngoku, vula umdlalo wePUBM kwaye uqalise ukudlala njenge pro. Lixesha lokuba yinkosi yesiqithi kwaye woyike iintshaba zakho kunye nabahlobo ngezibonelelo.
Siza kukuchazela ukuba ungasisebenzisa njani esi sicelo kwiselfowuni okanye kwi-smartphone yakho. Esi sicelo sisebenza ngokudala indawo eyahlukileyo kwifowuni yakho. Ke ungasebenzisa ubuchule bobuchule be-parallel okanye i-Clone ngendlela onokuthi uve ngayo ngenye indlela.
Oku kwenza ukwaziwa okufana kunye kwefowuni yakho eyahlukileyo kweyokuqala. Okwesibini, esi ayisosimbombo sokuba oko kuthetha ukuba awudingi kuyingcambu ifowuni yakho ukuze ukhuseleke.
Awuyi kufunyaniswa liqonga lePUBG kwaye ungasebenzisa onke amaqhinga kunye neengcebiso apha ngaphandle koloyiko. Apha ungangoyena ophumelele isidlo seNkukhu. I-APK ye-King VM yobuchwepheshe iqinisekisa ukuba.
Ngaba i-technical King VM APK yokukhuphela ikhuselekile?
Abenzi bale app bathi ikhuselekile ukuba isetyenziswe. Kodwa soze sazi xa uhlaziyo olutsha luza kubetha iqonga lePUBG. Uhlaziyo ngalunye luza neempawu zokhuseleko zangaphambili ezinokuthi zingavunyelwa ekuphumeleleni isixhobo sokukhangela.
Kwimeko enjalo, isazisi sakho sinokuthotywa sikhokelela kwisibhengezo esisigxina kwiqonga levidiyo. Ke kukubona kwakho. Sebenzisa izixhobo ngomngcipheko wakho kwaye esi sixhobo sokukhohlisa asisiyonto ikhethekileyo.
Ezinye iinkqubo ezifanayo:
I-King Multiple Space APK
Global Apk Virtual
I-technical King VM APK sisixhobo sokukhangela isixhobo ukusebenzisa iplanethi yemidlalo ye-PUBGM. Esi sixhobo sokungena ezingcwabeni siya kukunika inkululeko yokugqibela kunye namandla okuthimba kunye nesiqithi kude kube sekupheleni.
Ukufumana ifayile ye-APK, cofa nje ikhonkco elinikezwe ngezantsi kwaye ufumane inguqulelo yasimahla kunye neyakamuva ye-Android yakho.
iindidi izixhobo, Ukuqhekezwa komdlalo tags I-APK ye-King VM yobugcisa, Technical VM APK Khuphela uKhuphelo Post yokukhangela
Ukukhuphela i-APK ye-Ivive ye-Android [
I-Nephometer App Apk ye-Android [Nepometer]
© 2022 uLusoGamer